Indlu kwiLake Shortts - I-Airbnb
Indlu kwiLake Shortts
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJoseph And Allison
UJoseph And Allison yi-Superhost
Wamkelekile echibini! Yiza ufumane iholide epholileyo nevuselelayo kwindlu yethu esechibini. Zishiywe ekupheleni kwendlela uhleli phantsi nje kwe-acre yomhlaba. Yonwabela ikofu yasekuseni kwi-deck, i-BBQ yakho yesidlo sangokuhlwa ejonge ichibi, yiba nencwadi entle, ugcakamele iivenkile ezisecaleni komlilo onamavili uze ubukele ii-sunsets ezithi ndijonge edokisini. Le yinto onokuyonwabela ongasoze uyilibale!
Indlu engasechibini yindlu enevaranda evulekileyo enekhitshi elinento yonke nendawo yokutyela ehlala abantu abasibhozo. Inamagumbi amathathu okulala, igumbi lokuhlambela elipheleleyo, umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla, kunye nempompo yobushushu.
Le ndlu ijikelezwe yindawo entle echibini, imithi emihle, abamelwane abanobubele kunye nomgangatho omkhulu. Indawo eninzi yokupaka iimoto, iivili ezine nezithuthuthu.
Sinikezela nge-wifi, inyama eyojiweyo, i-firepit, imidlalo yebhodi kunye neencwadi, ii-kayak ezimbini, kunye neebhayisekile ezimbini.
Indlu engasechibini ilungele iholide kunye nentsapho kunye nabahlobo, ukuphumla ngempela-veki, ubusuku bokuthandana, unyaka, ukuzikhupha ebusika, ukubhiyoza, kunye nokubalekela isixeko okanye ukuphithizela kobomi bethu bemihla ngemihla. Yindawo entle onokuzikhuphela kuyo unyaka wonke. Gcwalisa iintsuku zakho ngokuloba, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngebhayisekile, ukuqubha nokuqhuba isikhephe. Okanye uziphe ixesha lokuphumla uze uphumle.
Umbuki zindwendwe ngu- Joseph And Allison